Cheap Organic & Compound Fatịlaịza Rotary Drum Screening Machine Ndị na-ere ngwaahịa na orylọ Ọrụ | YiZheng
Na Rotary Drum myọcha Machine bụ ihe eji eme ihe na fatịlaịza na-emepụta fatịlaịza, nke a na-ejikarị maka ikewapụ ihe ndị eweghachitere na ngwaahịa rụchara, na-amatakwa nhazi ọkwa nke ngwaahịa ngwụcha, ọbụnakwa wepụta ngwaahịa ikpeazụ.
Gịnị bụ Rotary Drum Sieving Machine?
Rotary Drum myọcha Machine A na-ejikarị eme ihe maka nkewa nke ngwaahịa gwụchara (ntụ ntụ ma ọ bụ nsogbu dị iche iche) na ihe nloghachi, yana nwekwara ike ịghọta ọkwa nke ngwaahịa ahụ, ka ngwaahịa ndị gwụchara (ntụ ntụ ma ọ bụ granule) nwere ike ịbụ nkewa ọkwa.
Ọ bụ ọhụrụ ụdị nke nhicha ihe-echetakwa akụrụngwa pụrụ iche. Ọ na ọtụtụ-eji echetakwa dị iche iche siri ike ihe na granularity erughị 300mm. Ọ nwere arụmọrụ dị elu, obere mkpọtụ, obere uzuzu, ogologo ndụ ọrụ, obere mmezi, mmezi dị mfe na ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ. Ike nyocha bụ 60 tọn / awa ~ 1000 tọn / awa. Ọ bụ ezigbo akụrụngwa na usoro mmepụta nke fatịlaịza organic na fatịlaịza njikọ.
Nwepu onwe onye Rotary Drum myọcha Machine na-eme ntụgharị dị mma nke akụrụngwa nkewa nkewa site na ụdị ụdị ụdị gearbox. Oghere nkewa nkewa bụ ihuenyo nwere ọtụtụ mgbanaka ọla nchara. A na-etinye cylinder nkewa n'etiti na ala ụgbọelu. Na ọnọdụ a chọrọ, ihe ahụ na-abanye na ntanetị cylinder site na njedebe elu nke cylinder nkewa nke etiti n'oge usoro ọrụ. N'oge ntụgharị nke cylinder nkewa, a na-ekewapụta ihe dị mma site na elu ruo na ala site na nkeji oge nke nwere nchara mbadamba ala, a na-ewepụkwa ihe na-adịghị mma site na nsọtụ ala nke cylinder nkewa na a ga-ebuba ya n'ime igwe na-ebupu ihe. rThe ngwaọrụ na-nyere na a efere ụdị akpaka ihicha usoro. N'oge nkewa usoro, na ihuenyo ahụ bụ nọgidere "combed" site na ihicha usoro site na ikwu mmeghari nke ihicha usoro na sieve ahụ, nke mere na sieve ahu na-ọcha mgbe niile na-arụ ọrụ usoro. Ọ gaghị emetụta arụmọrụ nyocha n'ihi mkpuchi nke ihuenyo ahụ.
Performance Njirimara nke Rotary Drum Sieving Machine
1. Nnyocha nyocha dị elu. N'ihi na akụrụngwa ahụ nwere usoro nhicha efere, ọ nweghị ike igbochi ihuenyo ahụ, si otú a na-emezi nlele nyocha nke akụrụngwa ahụ.
2. Ezigbo gburugburu ebe obibi. A haziri usoro nyocha niile n'ime mkpuchi uzuzu ekpuchi, na-ewepụ kpamkpam ájá na-efe efe na nyocha na imeziwanye ọrụ ọrụ.
3. Obere mkpọtụ nke akụrụngwa. Mgbe ị na-arụ ọrụ, a na-eme mkpọtụ nke ihe na ihuenyo na-agbagharị agbachapụ kpamkpam site na mkpuchi uzuzu kpochiri ekpuchi, nke na-ebelata mkpọtụ akụrụngwa.
4. Nlekọta dị mma. Ngwaọrụ a na-ekpuchi windo nyocha akụrụngwa n'akụkụ abụọ nke mkpuchi uzuzu, ndị ọrụ ahụ nwere ike ịhụ ọrụ nke akụrụngwa n'oge ọ bụla n'oge ọrụ.
5. Ogologo ọrụ ọrụ. A na-ejikọ ọtụtụ ihuenyo dị iche iche na ntanetị, yana mpaghara mpaghara ya buru ibu karịa mpaghara mpaghara ihuenyo nke ihe ngebichi ndị ọzọ.
Rotary Drum Sieving Machine Model Nhọrọ
Speedgba ọsọ ọsọ (r / min)
Nke gara aga: Machine Counter Flow Jụrụ
Osote: Linear jijiji Screener